आईसियूमा रहेका पूर्वपति गजुरेललाई मिनाले लेखिन् यस्तो पत्र - Dainik Online Dainik Online
आईसियूमा रहेका पूर्वपति गजुरेललाई मिनाले लेखिन् यस्तो पत्र
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १ : १६
काठमाडौं । कोरोना संक्रमित भई अस्पताल भर्ना भएका चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको अहिले आईसियूमा उपचार भइरहेको छ।
उनको अवस्था गम्भीर भएपछि आइसियुमा सारिएको हो। कलाकार गजुरेलको फोक्सोमा समस्या देखिएको बताइएको छ।
उनलाई कात्तिक १० गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि अस्ति बुधबार उनलाई उपचारका लागि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।
आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका गजुरेलले आफ्ना दाजुलाई अस्पताल ल्याउने लैजाने क्रममा आफू संक्रमित भएको शंका व्यक्त गरेका थिए।
शुभचिन्तकहरुले कलाकार गजुरेलको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन्।
यसैबीच, कलाकार गजुरेलकी पूर्वपत्नी मिना ढकालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पत्र लेख्दै शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छन्।
यस्तो छ उनको पत्र
जिन्दगीले जुनसुकै मोड अख्तियार गरेको भएपनि तिमी कुनै समयको मेरो प्रेमी थियौ। मेरो आफ्नै जन्मदातालाई भन्दा बढी प्रेम तिमीलाई गरेरै तिमीसंग एकाकार भएकी थिएँ। हामी एक भएका थियौँ र म परम्परा अनुसार तिम्रो सिंदुरको ऋणी भएकी थिएँ।
तिम्रो सेवालाई मेरो परम धर्म ठानेर तिमी संग मैले जिवनका विसौँ बर्ष पार गरेकी छु। तिम्रो र मेरो आत्मियताका साक्षी दुई प्राण छोरा र छोरी जन्माएकी छु। केही अपवादलाई बाहिर राखेर र मेरा केही खुशीहरुको गला रेटेरै पनि मैले तिमीलाई मेरो सिंगो जिन्दगी अर्पण गरेकी थिएँ।
भलै समयले तिम्रो र मेरो बिचमा दुरी ल्यायो होला फेरीपनि मेरा दुई सन्तानको जन्मदाताको रुपमा आजपनि म तिमीलाई उत्तीकै सम्मान गर्छु र माया गर्छु। आज तिमी आईसियुमा उपचारारत छौ भन्ने समाचारले मलाई वि़क्षिप्त बनायो। जतिसुकै मनमुटाव भएको भएपनि तिमी सिकिस्त भएको म सहन नसक्ने नै रहेछु आज महसुस भईरहेछ।
म तिम्रो सुस्वास्थ्यको लागि भगवान संग प्रार्थना गर्दछु। तिम्रो जिवन संग मेरा दुइ सन्तान पनि जोडिएका छन। तिमी ठिक छौ र त उनीहरु ढुक्क छन, सुरक्षित छन। छुट्टै भएपनि टाढै भएपनि तिम्रो सलामतीले मात्रै मेरा सन्तान सलामत छन-म यो रियलाईज गरिरहेछु।
मेरो प्रार्थना सुन्छन भगवानले, तिमी छिटै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेछौ र बाबुनानीको सामिप्यतामा पुग्नेछौ भन्ने आशामा छु। मनोज गजुरेल, तिमी छिटै हार मान्ने मान्छे होईनौ—मैले बिसौँ तिजका निराहार व्रत बसेकी छु तिम्रो लागि। आज पनि तिम्रो दिर्घायुको कामना गर्न छोडेकी छैन। छोराछोरी तिम्रो प्रति़क्षामा छन.. तिमी र म विच जस्तासुकै ब्यबहारीक बेमेल भएपनि तिम्रो जिवन मेरोलागि महत्वपुर्ण छ-हार नमानिदेउ। छिटै रिकभर भएर घर पुगेको देख्न पाउँ!
-उही तिमीलाई आयुश्मान भएको देख्न चाहने तिम्री पूर्व अर्धाङ्गीनी !!
कलाकार गजुरेल र ढकालले केही समय पहिले २२ वर्ष लामो बैवाहिक जीवनको अन्त्य गर्दै डिभोर्स गरेका थिए।
उनीहरुका २० वर्षका एक छोरा र १३ वर्षकी छोरी छन्। छोरा मनोजसँग र छोरी मिनासँग बस्दैं आएका छन्।
औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुल पनि घटाउछौँ : ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुल पनि
विदेशबाट डलर पठाउने नेपालीलाई भन्सारमा सास्ती किन ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता के कति देशको हितमा
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच समसामयिक विषयमा छलफल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच समसामयिक विषयमा आज अपराह्न छलफल भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०३० मा ५० प्रतिशत विद्युतीय गाडी बिक्री हिस्साको लक्ष्य निर्धारण
श्रीलङ्कामा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सङ्ख्या विश्वकै दोस्रो नम्बरमा : एम्नेस्टी इन्टरनेशनल
दशकौंको द्वन्द्व र त्यसपछिका अवस्थालाई हेर्दा श्रीलङ्कामा हजारौं मानिसहरू द्वन्द्वका कारण ‘बेपत्ता’ भएका एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले
पाकिस्तानमा कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु दर नौ प्रतिशतभन्दा बढी
करिब तीन महिनापछि बिहीबार गरिएका परीक्षणले कोभिड सङ्क्रमण दर नौ प्रतिशत भन्दा बढी देखाएपछि पाकिस्तानमा
गृहमन्त्रीद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको कामको प्रशंसा
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको कामको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
दवावमा माधव नेपाल : अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी एकताको पक्षमा
नेकपा (एमाले) को वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले पार्टीको आन्तरिक समस्या
‘मेरो मनमा चीन’ विषयक चित्रकला प्रतियोगिता
वैद्य माओवादीद्वारा कलाकार ‘राता मकै’को ४० बिघा जग्गा कब्जा
दुर्गेश थापाको गीत फेरि विवादमा
रामकृष्ण ढकालको नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियो)
‘मिस एण्ड मिसेस युनिभर्सल २०७८’ भदौमा हुने
अझै डेढ दशक चलचित्र क्षेत्र प्रभावित हुने
गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत दिने तयारी छ : मन्त्री भुसाल